घर युरोपियन स्टार Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
फेब्रुअरी 6, 2020
Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य। क्रेडिट: गोल र पिकोकी
LB पूर्ण स्टोरी को एक प्रस्तुत गर्दछ फुटबल जीनियस। यो पूर्ण कभरेज हो Jhethet Tanganga गरेको बाल्यकाल कहानी, जीवनी, पारिवारिक तथ्यहरू, अभिभावकहरू, प्रारम्भिक जीवन, र अन्य उल्लेखनीय घटनाहरू जब उहाँ बाल्यकालदेखि नै लोकप्रिय हुनुभयो।
शुरुको जीवन र जाफेट तंगाanga्गाको उदय। छवि क्रेडिट: Picuki र फुटबल लन्डन
हो !!, सबैलाई थाहा छ क Cong्गोलिस परिवारको मूलबाट फुटबलरलाई अंग्रेजी फुटबलको उच्च स्तरमा जीवनमा समायोजित गरिएको छ सबैलाई धन्यवाद विशेष एक। जहाँसम्म, केवल एक हातले थोरैले जाफेट टा T्गाanga्गाको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई ध्यान दिन्छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन
सुरूवातमा, Japhet Tanganga आमा बुबाले उसलाई पूरा नाम दिए Japhet Manzambi Tanganga उनको जन्म मा। ए Anglo्ग्लो-कole्गोलियस डिफेन्डरको जन्म मार्च १ United 30 1999 को th० औं दिन बेलायतको पूर्वी लन्डन जिल्ला ह्याकनीमा भएको थियो। अब तल फेला पार्नुहोस्, एक जफेट टanganga्गाangaका अविभावक- उसको जस्तो देखिने बुबा जो सम्भवतः उनको प्रबन्धक हो।
एक जाफेत टang्गंगाका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्- उसको ललिके ड्याड जो सम्भवतः उनको व्यवस्थापक हुन सक्छ। छवि क्रेडिट: Picuki
जे होस् लन्डनमा जन्मिए पनि जफेत टा T्गाanga्गाको परिवारको जरा भने मध्य अफ्रिकाबाट नै छ DR Congo। Peharbs, यो धेरै जसो उसको बुबाआमाले इ England्ल्याण्डमा बसाईसकेका हुन सक्छ पहिलो कo्गो युद्ध (1996-1997), एक युद्ध जसलाई उपनाम दिइएको थियो "अफ्रिकाको पहिलो विश्व युद्ध ".
Japhet Tanganga परिवार पृष्ठभूमि: हामीले जे भेला गरेका थियौं त्यसबाट जफेट तang्गाanga्गा एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्केको थियो। उनका बुबाआमा लन्डनका अधिकांश नागरिकहरू जस्तै थिए जसले काम गरे र राम्रो वित्तीय शिक्षा पाए। तिनीहरू सजिलो थिए र कहिले पनि पैसा कमाउन संघर्ष गर्दैनन् उनीहरूको परिवारको लागि।
Japhet Tanganga प्रारम्भिक जीवन: फुटबल प्रेम गर्ने परिवारमा जन्मेको सानो फुटले हिंड्न सक्ने बित्तिकै फुटबल बललाई लात हान्ने काम दिईयो। प्रारम्भमा, ऊ यस्तो किसिमको बच्चा देखा पर्‍यो जुन नयाँ खेलौनाको नयाँ संग्रहमा रुचि राख्दैन "फुटबल'। साथै, hएक फुटबल-मायालु Aving DAD जो एक ठूलो Spurs प्रशंसक थियो, यो ਜਪह को लागी प्रेम र समर्थन गर्न को लागी सजिलो थियो टोटेनहम हटस्पर्स बच्चाको रूपमा।
Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
फुटबलप्रति उनको प्रेमको बाबजुद, जाफेट तang्गाangaका आमाबाबुले उनीहरूको शिक्षामा सम्झौता गर्दैनन् भन्ने प्रारम्भिक धारणा थियो। उनीहरूले उसलाई भित्र भर्ना गरे ग्रेग सिटी एकेडेमी Haringey को लन्डन बरो मा अवस्थित। तपाईंलाई थाँहा थियो?… २००२ मा स्थापित यो प्रसिद्ध लन्डन स्कूल यसको लागि प्रसिद्ध छ युके रोबोटिक्स च्याम्पियनशिप प्रशंसक २०१ 2018 मा प्राप्त भयो।
संग स्कूलको बावजुद ग्रेग सिटी एकेडेमी, फुटबल शिक्षा प्राप्त गर्ने खोज प्रबल भयो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… तान्anga्गाको फुटबल गन्तव्यमा भूमिका खेल्ने प्रमुख कारक उनको परिवारको घर र व्हाइट हार्ट लेनको बीचको निकटता थियो (टोटेनहम हटस्पर्स पूर्व स्टेडियम)। तल अवलोकन गरिए अनुसार, स्प्याटको फुटबल खेलहरू हेर्नको लागि ह्याचेनीबाट ह्वाइट हार्ट लेनमा यात्रा गर्न जाफेट त Jap्गाanga्गाका परिवारका सदस्यहरूलाई १ 13 मिनेट मात्र लाग्छ।
ह्याक्नीमा जाफेट त T्गाanga्गा परिवारको घर व्हाइट हार्ट लेनबाट १ minutes मिनेट टाढा छ। क्रेडिट: गुगल छविहरू
किशोरावस्थामा पुग्दै, जाफेटले फुटबल एकेडेमी परीक्षणमा भाग लिन थाले। अपेक्षित रूपमा, चीजहरू राम्रो भए र यो चाँडै स्पष्ट भयो कि भाग्यशाली बच्चा टोटेनह्याम एकेडेमी परीक्षामा पारित भएको थियो- उसको परिवारको लागि खुशीको क्षण.
Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
भाग्यमानी बच्चा सफल परीक्षण पछि १० बर्षको उमेरमा स्पर्स एकेडेमी रोस्टरमा भर्ना भयो। जीवितको लागि फुटबल खेल्ने उसको केटाको चाहनालाई बुझ्दै, जाफेत तang्गाangaका आमा-बुबाले उल्लेख्य रूपमा उनका बुवाले आफ्नो आकांक्षालाई समर्थन गर्न यथासक्दो गरे।
Japhet Tanganga Spurs युवा स्तरको मार्फत एक आशाजनक डिफेन्डरको रूपमा आफ्नो बाटोमा काम गर्नुभयो। उ एक आक्रामक मा विकसित भयो whiz बच्चा जसले तुरुन्तै एकेडेमीको साथ एक प्रभाव बनायो। सानो जाफेट रक्षा र आक्रमण दुबै दुबै टिमको बिरूद्ध फस्टायो। एकेडेमी दिनहरूमा उसको शुटि pr सामर्थ्यको भिडियो प्रमाणको तल एक टुक्रा छ।
प्रारम्भिक क्यारियर सफलताको इनाम एकेडेमीमा of वर्ष बसे पछि आए। यस पटक, जयफेट तang्गाanga्गाका परिवारका सदस्यहरूको खुशीको समयमा कुनै सीमाना थाहा थिएन उनीहरूको आफ्नै (जब उहाँ १ 14 वर्षको हुनुहुन्थ्यो) इ the्ल्यान्ड U16 टीमको भाग हुन बोलाइएको छ।
Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
१ 2015 वर्षको उमेरमा सन् २०१ 16 मा पेशागत ठेका र छात्रवृत्तिको बारेमा पहिले नै छलफल भइरहेको थियो। त्यस समय जाफेट तang्गाanga्गालाई थाहा थियो कि सफलता प्राप्त गर्नका लागि उनको लागि प्राविधिक गुण हुनु आवश्यक छ, थोरै भाग्य र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने चोट पुर्‍याउनु हुँदैन (घाइते)।
प्रयासहरू चुक्ता गर्न सुरु हुनु अघि यसले केहि समय लिएन। पहिले, जाफेटले तल चित्रण गरेको उनको स्पर्स एकेडेमी पक्ष लाई उठाउन मद्दत गर्‍यो युवा ट्रफी, एउटा जुन उनी र तिनका साथीहरूले लाकर कोठामा स्टाइलिशली मनाए।
जेफेट टang्गा Jap्गा रोड फेम कथा। क्रेडिट: Picuki
तपाईंलाई थाँहा थियो?… Japhet पनि नाम थियो सबैभन्दा मूल्यवान खेलाडी (MVP) अगस्त २०१ 2014 मा उनीहरूको दक्षिण कोरिया कपको दौरान। तल भिडियो प्रमाणको एक अंश छ- उहाँ र उनका टीमका साथीहरूको सेल्फ स्टाइल उत्सव। यसले उनीहरूसँग भएको गहिरो सम्बन्धको चित्रण गर्दछ।
बिग इ England्ल्यान्ड जीत: स्पर्स युवामा ट्रफी जित्नको साथसाथै २०१ Jap टुलन टूर्नामेन्टमा जाफेट तang्गाang्गाले पनि अभिन्न भूमिका खेल्‍यो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उहाँ सँगसँगै हार्वे बर्नेस र रेस जेम्स फाइनलमा आइभरी कोस्टलाई हराएपछि उनको देश (इ England्ल्यान्ड) ले छैठौं टुलन उपाधि जित्न मद्दत गर्‍यो।
रिप जेम्स र हार्वे बार्न्ससँगै जापले इ England्ल्यान्डलाई २०१ T टुलन टूर्नामेन्ट जित्न मद्दत गर्‍यो। क्रेडिट: ESPN
Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
Japhet Tanganga को फुटबल परिपक्वता प्रक्रिया को मोड मा लेट द्वारा सम्भव भएको थियो Ugo Ehiogu जो आफ्नो मृत्यु अघि टोटेनहम हटस्पुर U23 टीमका प्रशिक्षक थिए। टोटेनहम हटस्पुर प्रशिक्षण मैदानमा कार्डियक अरेस्ट पछि अप्रिल २०१ in मा नाइजेरियामा जन्मे उगोको मृत्यु भयो।
स्वर्गीय उगो इहियोगु एक स्पन्स वरिष्ठ कलअपमा तang्गाanga्गालाई मद्दत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। क्रेडिट: व्यक्त
टा late्गंगालाई एक वरिष्ठ क्यारियर कलअपको लागि यात्रामा लेट स्पर्स कोचले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। २०१go मा उगोको मृत्यु पछि, टाang्गाanga्गालाई पहिले नै एक शक्तिशाली डिफेन्डरको रूपमा लेबल गरिएको थियो जुन उसको ट्रेडमार्क शक्तिशाली हेडर, गति र प्रविधिको लागि परिचित छ। जुन २०१ 2018 मा पहिलो अनुबन्धमा हस्ताक्षर गरेपछि, जवान केटाले तीन महिना पछि (सेप्टेम्बर २०१)) एक वरिष्ठ EFL कप खेलमा वरिष्ठ पदार्पण गरे। by Mauricio Pochettino.
ठूलो आशिष्: आउँदैछ Jose Mourinho २० नोभेम्बर २०१ On मा ए Anglo्ग्लो-कole्गोलिसको भेषमा बिग आशिष्‌ बने। उहाँको स्पर्समा आइपुगेको केही हप्ता पछि, विशेष एक युवा खेलाडी को एक हताश खोजी शुरू गर्यो जसले आफ्नो संघर्षपूर्ण फुलब्याक्सको लागि आशाको किरण प्रस्तुत गर्दछ डैनी गुलाब। कडा परिश्रम गर्दै जाफेट उसको मनपर्ने विकल्प बने सबैलाई यी गुणहरू धन्यवाद Mourinho अवलोकन
जोसेत तang्गाanga्गाले जोस मोरिन्होलाई प्रभाव पार्न पर्याप्त भन्दा बढी गर्‍यो। क्रेडिट: Picuki, GI, LasgidiReporter
जोस मोरिन्हो तang्गाanga्गामा विश्वास गरे त्यस्तै प्रकारले उनले विश्वास गरे स्कट McTominay जब उनी युनाइटेड बॉस थिए। स्पर्स बॉसले उनीलाई अनुभवीमाथि भरोसा गरे जन वेर्टनघेन, रयान Sessegnon र बेन डेभिस, जनवरी २०२० को ११ औं दिनमा लिभरपुल बिरूद्ध आफ्नो पहिलो EPL खेल खेल्न हर्कुलिअन टास्क प्रदान गर्दै।
लिभरपूल खेल खेल्नु अघि किन प्रश्न गरियो कि अनुभवी स्पर्स खेलाडीहरूमा किन तanga्गा played्गा खेलियो, मोरिन्होले सरल रूपमा भने: “ऊ छिटो छ, ऊ छिटो छ। "टाang्गाanga्गाले राम्रो खेलेको सुन्दर खेल पछि, मोरिन्होले उनको निम्न कुरा भने;
'उनले राम्रो खेले। बच्चाको नयाँ स्तरसँग धेरै खुसी हुने कारण छ, नतिजा स्पष्टसँग होइन, तर प्रिमियर लिगमा पहिलो खेलसँग। यो ठूलो हुन सक्तैन र उनले आश्चर्यजनक कार्य गरे। ”
अगाडि बढ्दै, तang्गाanga्गाले खुसीसाथ दिएको अवसरलाई सबैको प्रभावमा लिएको छ। उहाँ अब Spurs प्रशंसकहरु बीच उच्च दर्जा दिइएको छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण, उहाँ हुनुहुन्छ जोस मोरहोइनको मुख्य केटा !! (लेखेको समयमा)।
जाफेट लेख्ने समयमा मोरिन्होको सबैभन्दा मूल्यवान रक्षात्मक सम्पत्ति मध्ये एक हो। क्रेडिट: फुटबल लन्डन र TheSportsRush
Tanganga पहिलो जनवरी २०२० मा लिभरपूल बिरुद्ध पहिलो प्रीमियर लीग खेल वास्तवमा सम्झन को लागी एक हो, बिर्सनु पर्छ, नतीजा। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
२०१२/२०२० सिजनमा निकालेको पछि प्रसिद्धिमा उसको बृद्धि संग, यो निश्चित छ कि केहि स्पर्स प्रशंसकहरूले केहि प्रश्नहरुमा सोच्न सुरु गरेको हुनुपर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि लन्डन जन्मे फुटबलर एक प्रेमिका छ वा यदि उनी विवाहित छन्, यसको मतलब ऊ एक श्रीमती छ। टाang्गanga्गाको नयाँ दृश्यले उसलाई सम्भावित प्रेमिका र पत्नी सामग्रीका लागि प्रिय बनाउने तथ्यलाई इन्कार गर्ने कुनै ठाउँ छैन।
जाफेत टाang्गाanga्ग गर्लफ्रेंड को हो? - स्पर्स फ्यानहरूले सोध्न थालेका छन्। क्रेडिट: Picuki
सुत्रहरूको लागि इन्टरनेट सर्फिंग घण्टा बिताए पछि, हामी यो निष्कर्षमा पुगेका छौं कि लेखनको क्रममा जाफेट तang्गाanga्गाले आफ्नो प्रेमिका वा पत्नी को हो भनेर नजनाउन सचेत प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, यो हुन सक्छ कि जाफ एकल छ (लेखनको समयमा), एक कथन जसलेaको अस्तित्वलाई जनाउँछ WAG। तर तपाइँलाई थाहा छ कसरी जोस मोरिन्हो मुनि फुटबल अन-माफ हुन सक्छ जब यो सम्बन्धको मामिलासँग राम्रोसँग ह्यान्डल गरिएको छैन। यो एक कारण यो हुन सक्छ कि उहाँ जफ लिखित समयमा एक प्रेमिका वा पत्नी नहुन सक्छ।
Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
जाफेत टाang्गाanga्गाको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईंलाई खेलको मैदानमा उसको व्यक्तित्वको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरू गरेर, फुटबलरहरू बीच, त्यहाँ केहि जो पिचमा राम्रो देखिन मन पराउँछन् र हाम्रो आफ्नै जाफेट तिनीहरू मध्ये एक हो। तलको आफ्नो तस्विरबाट हेरेर, टाang्गाanga त्यस्तो व्यक्ति हो जसले संसारलाई महसुस गराउँदछ कि यो सम्भव छ उसको साइक र तपाईंको क्यारियर दुबै तातो हुनको लागि।
Japhet Tanganga व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरु
कुनै श doubt्का बिना, जाफ एक ईर्ष्यालु व्यक्तिगत जीवन बिताउँछन्, केहि धेरै उत्साही फुटबलरहरू इच्छा गर्न चाहन्छन्।
Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
युवा अ English्ग्रेजी फुटबलर पूर्वी लन्डनमा संगठित जीवन बिताउँछन्, जीवन शैली जुन असंगत खर्चबाट वञ्चित छ तर तल देखाइएको अनुसार सीसाइड साहसिक कार्यले पूर्ण। तपाईंलाई थाँहा थियो?!! जाफेट प्राय: छुट्टि भएको समयमा देखिन्छ लोकप्रिय समुद्री किनार गन्तव्यहरु मा एक रमाइलो जीवन शैली।
Japhet Tanganga जीवन शैली तथ्यहरु
लेख्ने समयमा त्यहाँ कुनै त्यस्तो चीज छैन जुन विदेशी कारहरूमा फ्लर्ट गर्नु र ठूला घरहरू प्रदर्शन गर्नु (मान्छे) जुन एक भव्य जीवनशैली को संकेत हो।
Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
सुरू गर्दै, Japhet परिवारको नाम Tanganga " अंक: १, 1,969,394।।, XNUMX।। छनth विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा व्यापक रूपमा आयोजित अन्तिम नाम मध्ये (forebears रिपोर्ट)। यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई जाफेट टाang्गाanga्गाका आमा बुबा र भाइबहिनीहरूको बारेमा थप विवरण प्रदान गर्नेछौं।
जाफेत टाang्गाanga्गाको बुबाको बारेमा: Tanganga Snr जन्म को गुण बाट DR कांगोको हो। लेखनको समयमा, उहाँ हाल आफ्नो छोराको प्रबन्धकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। आफ्नो छोराको प्रतिनिधिको रूपमा, तang्गाanga्गा स्न्रले डीआर कo्गोका अधिकारीहरू हुने आशा राखेका छन् (चाँडै) छोरालाई इ England्ल्याण्डको सट्टामा खेल्नको लागि मनाउने दृष्टिकोणको साथ चारैतिर घुम्दै।
जाफेत तang्गाanga्गाको आमाको बारेमा: Tआanga्गाum्गाको आमा उनीको जन्मको आधारमा डीआर कo्गोबाट पनि छ। हामीमाथि उसको मात्र त्यस्तो वास्तविकता छ। हामीले जे जम्मा गरेका थियौं, त्यसबाट यस्तो देखिन्छ कि जाफेट तang्गा's्गाको आमाले उनको निजी जीवनमा कुनै स्पटलाइट नहुनको लागि सचेत प्रयास गरेको छ।
जाफेत टाang्गाangaका भाई बहिनीहरूको बारेमा: जाफेट लन्डनमा जन्म भएको तथ्यलाई विचार गर्दा यो सम्भव छ कि ऊ दाजुभाइ (दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी) हुन् जो पनि बेलायतका नागरिक हुन्। लेखनको बखत, तानाanga्गाका भाई-बहिनीहरूको बारेमा कुनै कागजात छैन।
Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
उसको फुटबल आइडल: के तपाईंलाई थाहा थियो? ... Japhet Tanganga गरेको अर्जेन्टिना पेशेवर फुटबॉलको एक विशाल प्रशंसक हो पलो डाइब्ला। यद्यपि बिभिन्न स्थानहरू खेल्दै, फुटबलरले स्पर्स एकेडेमी र यु २ with सँग आफ्नो समयमा ग्लेडिटर गोल उत्सव गर्दछ, जुन उसले मूर्तिबाट छान्छ। पलो डाइब्ला.
Japhet Tanganga आफ्नो फुटबल आइडल को रूप मा पाउलो Dybala छ। छवि क्रेडिट: लक्ष्य र Picuki
Japhet Tananga FIFA रेटिंग्स: अन्डररेटेड प्लेयर रेटिंग is सधैं चर्चाको लोकप्रिय विषय जब पनि एक धेरै युवा फुटबलर चम्काउन शुरू हुन्छ। तल अवलोकन गरिए अनुसार, फिफा २० जाफेट तान्ang्गाका लागि फरक छैन। दुर्भाग्यवश, FIFA भिडियो गेमरहरू लाई कठिन खेल मा उसका 20 ra रेटिंग्स (तल हेर्नुहोस्) को उपयोग गर्न गाह्रो लाग्छ।
फिफा २० रेटिंग्सले देखाउँदछ कि ऊ एक ज्यादै अन्डररेटेड खेलाडी हो जसले भर्खरै दृश्यमा भाँडा टेकायो। क्रेडिट: SoFIFA
जहाँसम्म, फिफा क्यारियर मोडमा, टाang्गा a्गाको भविष्य राम्रो भविष्यको लागि छ - of२ को सम्भावना। उनले अ football्ग्रेजी फुटबल दृश्यमा खेल्ने तरीकालाई ध्यानमा राख्दै, यो निश्चित छ कि उसले आफ्नो वर्तमान फिफा २० बढाउनेछ। 82 रेटिंग्स - हुन सक्छ 90 वा माथि.
धर्म: येफेथ टाang्गाangaका आमा बुबाले उनलाई इसाई धार्मिक विश्वासको पालनामा हुर्काए। तपाईंलाई थाँहा थियो?… "येपेतकाबाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकमा नूहका तीन छोरामध्ये एकलाई दिइएको नाम हो। यो तथ्यले उनी धर्मबाट एक इसाई हो भनेर प्रमाणित गर्दछ।
टैटू तथ्य: पनि तिमी ट्याटु संस्कृति आजको खेलकुद संसार, टाang्गाanga्गामा धेरै लोकप्रिय छ लेखनको समयमा शाई लाई एन्टीडोट जस्तो देखिन्छ। यसको मतलब ऊ ट्याटू-मुक्त छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो पढ्नको लागि धन्यबाद जाफेत तान्anga्गा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
vannyhenrico - अप्रिल 4, 2020
vannyhenrico - अप्रिल 4, 2020 0
अप्रिल 4, 2020
डिसेम्बर 2, 2018
ट्रेंट अलेक्जेंडर-एर्नोल्ड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
फेब्रुअरी 12, 2018
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
फेब्रुअरी 18, 2020